E-News Nepali || Fast and Accuracy » कुमार–अनुपा प्रहरीबाट छुटे : कुमार र चुनीमाया मिले, अनुपालाई नुकलले नलगेपछि भइन् घर न घाटको (भिडियो)
कुमार–अनुपा प्रहरीबाट छुटे : कुमार र चुनीमाया मिले, अनुपालाई नुकलले नलगेपछि भइन् घर न घाटको (भिडियो)
काठमाडौं- केही महिना अघि देखी चर्किदै र सामाजिक संजालमा भाईरल हुँदै आएको बिषय थियो नकुल अनुपा र कुमार प्रकरण । तनहूँ जिल्लाको भानु नगरपालिका वडा नं ९ बाईसजागरका नकुल अधिकारीले श्रीमती अनुपा अधिकारीबाट धेरै नै सम्पती सहित बेपत्ता भएको भनेर मिडियामा आए ।
पछि थाहा भयो अनुपा दुई छोरी सहित कुमार स्याङ्जाका कुमार कार्कीसंग भागेकी रहिछन् । कुमार र अनुपालाई भरतको केरलाबाट समातेर ल्याएपछि प्रहरीको जिम्म लगाईयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहूँका अनुसार हराएको भन्ने निवेदन परेकाले दुबैलाई छोडिएको छ ।
कुमारकी श्रीमती चुनीमायाले कुमारलाई स्वीकार गरेर आफ्नो घर लगेकी छन् भने अनुपालाई भने नकुलले स्वकीकार गरेका छैनन् उनी माईतीकै साथमा गएकी छन् । चुनीमाया र कुमार कार्कीको पुनःमिलन भएको छ । आखिर किन कुमारले अनुपाको साथ छोडीन् ? किन चुनीमायाले कुमार कार्कीलाई स्वीकार गरीन् ? हेर्नुहोस् यो भिडियो
प्रकाशित मिति ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०७:४०